I-Semalt: Iyini i-Bot yogaxekile nokuthi iyayivimbela kanjani
Uma ungene ngemvume ku-akhawunti ye-Google Analytics futhi uqaphele i-spike ngokuzumayo ngezikhathi, amathuba ukuthi i-bots nokudluliselwa kogaxekile kushaya iwebhusayithi yakho. Ngamahloni, ungase uzizwe ukuthi uzokuthola ukuthengisa nokuhola, kepha ukubuka eduze komthombo wezinhlangano kuzokunika umqondo wokuthi ivelaphi ithrafikhi. Ama-Spambots ikakhulukazi anesibopho esiphansi sewebhu website . Eminyakeni yamuva nje, abakhulu be-webmasters baningi baye bakhononda ukuthi ama-spam bots abathumela ama-sites abo futhi kubonakala sengathi abantu bangempela bavakashele amakhasi akho ewebhu. I-hat ne-SEO ne-spam bots engafanele ingakwazi ukudonsa idatha yakho ye-Google Analytics ngenani elikhulu. Ngaphezu kwalokho, lezi bots zivela njengoba zivakashela isayithi lakho izikhathi eziningi kodwa izinga lokunciphisa lingu-100%. Uhlinzekwa ngaphandle kwedatha enhle, futhi simo sakho sesayithi siqala ukwehla usuku nosuku.
Kuyini i-Spam Bot?
uFrank Abagnale, i-17 (Semalt iMenenja yeNtuthuko yeMakhasimende, uchaza ukuthi i-bots yizinhlelo ezizenzekelayo ezinekhono lokwenza izenzo ngaphandle kokufaka okubhaliwe. I-Bot inesibopho sokwenza imisebenzi eminingi umuntu wangempela angagcwalisa phakathi kwamahora, izinsuku noma amasonto. Amabhuzu adinga amasekhondi ambalwa kuphela ukufeza imisebenzi eminingi ngesikhathi futhi adalwe ukuvakashela isayithi lakho ngokungabonakali.
Umehluko phakathi kwamaBhothi angekho emthethweni futhi angokomthetho
I-bots evumelekile noma yangempela ingezona injini yokusesha njengeBing, Yahoo, ne-Google. Bangakwazi ukubhala i-website yakho futhi babonise wonke amakhasi akho kumiphumela yosesho . Lezi bots azilimazi isayithi lakho nganoma iyiphi indlela, kanti ama-bots angekho emthethweni ahloselwe ukulimaza iwebhusayithi yakho..Kubonakala sengathi bavakashela isayithi lakho futhi bangakuthola imibono eminingi, kodwa akusiyo indawo yokubheka futhi bayabizwa ngokuthi ama-bots. I-bots ejwayele kakhulu futhi edumile yokudluliselwa kwe-spam iyisenzakalo-tracking.com, free-share-buttons.com, social-buttons.com, darodar.com, futhi uthole-free-traffic-now.com.
Kunezinhlobo ezithile ezizungeze lawa mawebhusayithi, futhi ama-URL abo avela kuma-akhawunti we-Google Analytics ngokuzenzekelayo. Uma ulandela ama-URL wabo ukuze wazi okwengeziwe ngalezi zinkampani kanye namaphakheji abo okukhangisa, amathuba ukuthi azolimaza iwebhusayithi yakho. Isibonelo, uma ubona ugaxekile wokudluliselwa (bheka-your-website-here.com) ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics, kufanele ususe ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Ungavimbela kanjani i-spam bots ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics?
Cishe zonke izingosi zokudluliselwa kogaxekile ziyizikhulu ezinkulu futhi kufanele ziqedwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. Uma uhlangabezana nokugaxekile okusha kokudluliselwa ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics, kufanele uyihlungile, kodwa ukungahle kwenzeke kule nqubo ukuthi amabhuthi azayo azoqhubeka evakashela iwebhusayithi yakho. Kusho ukuthi bayothatha izinsiza ze-server yakho futhi kuzothinta ijubane lokulayisha lesayithi lakho. Noma kunjalo, kungenzeka ukusebenzisa ifayela le-.htaccess ukuvimba wonke amawebhusayithi egaxekile. Kuyafaneleka ukuthi ifayela le-.htaccess liyindlela enamandla yokuvimbela yonke indawo esolisayo. Isinyathelo sokuqala ukufaka ikhodi ethile kufayela lakho le-.htaccess. Uma leli fayela lingasebenzi kahle, kufanele ulayishe ifayela elisha le-.htaccess emmpandeni wesizinda.
Enye indlela esheshayo nelula yokulungisa i-spam bot ngokudala izihlungi eziphambili ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics. Ngena ku-akhawunti yakho bese uchofoza kuthebhu ye-Admin. Kulokhu, kufanele uhambe ku-Yakha i-New View option, futhi ngaphansi kwesigaba sokubuka igama lokubika, uzobona inkinobho yamahhala yogaxekile. Lapha kufanele uchofoze ukhetho olusha lwe-Filter futhi ungakhohlwa ukubiza isihlungi sakho.